७ सहसचिव सचिवमा बढुवा हुँदै, को-को छन् ? | NepalDut
७ सहसचिव सचिवमा बढुवा हुँदै, को-को छन् ?
सरकारले ७ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । उमेर हद र पदावधिका कारण भदौ २१ सम्ममा ७ जना सचिवले अवकास पाउने भएपछि रिक्त हुन आउने पदमा बढुवा तयारी सुरु भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार प्रशासन समूहबाट ४ र प्राविधिक समूहबाट ३ सहसचिव सचिवमा बढुवा हुनेछन् ।
प्राविधिक सचिव बढुवामा सहसचिवहरु रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, शिवहरि शर्मा, सागरकुमार राई र सुरेश आचार्य प्रतिस्पर्धामा छन् । बढुवा प्रत्यासी रहेका शर्मा र आचार्यको राजनीतिक पहुँच राम्रो छैन । उनीहरूको बढुवाको दौडमा सशक्त नरहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार सरकारले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै रामकृष्ण सापकोटा, मणिराम गेलाल र प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई माथि ल्याउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्साललाई अवकाश अगावै ४ वर्षका लागि निजामती कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । लम्साल साउन २२ देखि अवकाश पाउँदैछन् ।
यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज देवकोटा, लालशंकर घिमिरे, अनिलकुमार ठाकुर र रामकुमार आर्चायले भदौ अन्तिमसम्ममा अवकाश पाउँदैछन् ।